Dad badan ayaa aaminsan in laga yaabo in Windows Media Player si tartiib ah laga badiyay caan laakiin ma aha gebi run. Warka cusub iyo sii daayo ayaa ka caawisay in lagu hayo ololka media player suuqa kala nool. Waxaa jira wax badan oo aad samayn karto oo aad windows media player. Xuquuqda laga ciyaaro noocyada kala duwan ee files, in la beddelo haraggiisii, iyo ku rakibidda kala duwan ah iyadana. Windows ciyaaryahan warbaahinta ayaa u soo muuqday a Tababaraha audio / video caan ah in dhowrkii sano ee la soo dhaafay. The version ugu dambeeyey waa 12 kuwaas oo ku jira tiro ka mid ah muuqaalada xiiso leh si ay usoo jiitaan macaamiisheeda. Haddaba haddii aad doonaysid in aad cusboonaysiiso media player jir ah, halkan waxaa ku qoran talooyin degdeg ah waa in aad ka fiirsan.
Qeybta 1: 5 talooyin update Windows media player
Qeybta 2: Sida loo soo bixi daaqadaha media player updates?
Talo 1: Update / download ka website daaqadaha
Windows media player gabi ahaanba waa software free oo mar walba waa in aad fiiriso in website-ka rasmiga ah ee daaqadaha u soo degsado ay update ama software dhameystiran. Fadlan booqo www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download si aad u aragto liiska downloads la heli karo.
Talo 2: Had iyo jeer sii joogo si qarsoodi ah
Marka aad gelinayaan daaqado ciyaaryahan warbaahinta, waxa abuuraa ID u gooni ah computer. ID waxaa loo isticmaalaa meelo badan si uu u hubiyo in aad xiriir. Inkastoo ciyaaryahanka ayaa oggolaadey in aanay qaadan wixii macluumaad shakhsi ah, laakiin waxaa jira waqtiyo ay ula socdaan waxa aad daawashada. Haddii aadan rabin in macluumaadkaaga si ay u da'aan, markaas dami habkaani. Waxaad la xiriiri kartaa off habkaani ka "qalab" menu. Tools Options - goobaha> internet Player> gab "ogolaan goobaha internet si gaar ah loo aqoonsado aad ciyaaryahanka".
Talo 3: Update / download codec
Marka aad updated aad windows media player, waa in aad u hubiyo nooca file waxa ay taageertaa. By default, windows media player ma taageeri noocyo badan oo files kaas oo waa in aad kala soo bixi codec ah iyo sidoo kale. Codec A ahayn ma aha feature dheeraad ah oo loogu talagalay windows media player oo waxay ka caawisaa in ay aqoonsadaan iyo ciyaaro kala duwan oo ka mid ah qaabab kale file.
Talo 4: warbaahinta ciyaaryahan Windows, qalab awood
Degsado windows media player keliya kuma filna inay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka ay ka buuxaan. Waxaad u baahan tahay si uu u hubiyo siyaada ah oo aad u. Raadi xirmo qalab awood taas oo ka kooban tiro ka mid ah qaababka kale ee windows media player. Liiska Habkaani ka mid noqon kara nadaafadda ah "oo dhawaan loo isticmaalo" iyo converters audio / video. Marka aad rakibay qalab awoodeed, in la heli doono in saxaarad ku dhuunto oo kale ah guddi ka halkaas oo aad si fudud u maarayn karaan.
Talo 5: Play DVDs tayo sare oo keliya on your ciyaaryahan
Haddii aad dhabtii doonaysid si aad u hagaajisid user waayo-aragnimo leh windows media player, ka dibna waxaad dooran kartaa in ciyaaro kaliya tayada video / audio adiga kuu wanaagsan. Si aad u dhigay Doorashadan, doortaan "qalab" menu iyo Options ka dibna dooro. Dooro tab DVD ka furmo suuqa tan iyo markaas guji "isbedel" button. Dooro "isbeddel xayiraad rating" dooro R laga dropdown ah.
Windows media player hayaa leh ku daray oo la rajeenayo in cayayaanka bilaabay updates ay. Waxaad sameyn kartaa in aad warbaahinta ciyaaryahan midkood update si toos ah ama waxaad eegi kartaa casriyeysan ee gacanta iyo download it at kuu gaar ah sahlo. Si aad u soo dejisan / cusbooneysiin karo windows media player ah, waa in aad la gasho sida "maamulaha".
Fadlan raac tallaabooyinka hoose si uu u hubiyo daaqadaha media player gacanta Wararka:
Talaabada 1: fur windows media player oo haya ama gujinaya ay toobiye ama iyada oo menu bilowga. Marka aad furay aad windows media player, bedesho hab maktabadda haddii aad tahay hab ciyaareed ah.
Talaabada 2: From menu caawimaadda, dooro "Hubi Updates for" badhanka. Haddaba ciyaaryahanka si toos ah u fiirsado updates internetka.
Si kastaba ha ahaatee haddii aadan rabin in lagu hubiyo updates gacanta waqti kasta, waxa kale oo aad dooran kartaa "jeeg casriyeysan si toos ah" ku. Si aad u awood habkaani, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Talaabada 1: ka menu bilowga ama toobiye fur windows media player ah. Haddii media player waa hore u furan, ka dibna u baddashaan ah "mode maktabada".
Talaabada 2: Wuxuu furaa "abaabulo" ka dibna dooro "fursadaha".
Tallaabo 3: Ka dooro "ciyaaryahanka" tab ka dibna dooro bareeg ka dib oo aad rabto in aad doonaa ciyaaryahan si aad u hubiso ka hooseeya "Hubi casriyeysan" doorasho casriyeysan ah. Tusaale ahaan: "Mar haddii maalin", haddii aad rabto in lagu hubiyo updates maalin kasta.
> Resource > Windows > 5 talooyin update daaqadaha media player